waxaa la aasaasay sanadkii 1984, xubin ka mid ah Tianjin Cuntada Kooxda Co., LTD, shirkadeenu waxay ku taalaa No.1 Shengchan West Road, Majiadian Industrial Area, Degmada Baodi, Magaalada Tianjin, Wadarta guud waa 46620 mitir murabac, waxay leedahay caasimada diiwaangashan 8 milyan oo Doollarka Mareykanka ah.
Bishii Diseembar 2004, shirkaddu waxay hoggaanka u qabatay isla warshadda Shiinaha si ay uga gudubto shahaadada nidaamka maaraynta tayada caalamiga ah ee ISO9001: 2000, dhammaan badeecadaha waxay la kulmaan shuruudaha ilaalinta deegaanka, waxayna heleen shahaadada Oeko-Tex 100.
Wax soosaarka ugu weyn ee warshaddeena waxaa ka mid ah jillaab iyo loop oo leh Nylon ama Polyester, Plastic hook ， Hook and Loop processing deep and towing thread. Codso dharka, kabaha, teendhooyinka iyo ilaalinta gacanta iyo qalabka caafimaadka iwm.
Wax soo saarka Our warshad waa iibinta kulul ee Shiinaha, dhoofiyo dalal badan oo adduunka ah. Kanada Fellfab Limited oo ah wakiil gaar ah aagga Waqooyiga Ameerika. Daacadnimo, Tayada ugu fiican iyo adeega sida fikradeena maaraynta oo aan u hurno sidii aan u noqon laheyn hogaamiyaha safka
"Iimaanka wanaagsan ee tan, tayada waa nafta" waa ujeeddooyinka ganacsi ee shirkadeena, "daacadnimo, dadaal, rajo wanaagsan, iskaashi wax ku ool ah, turxaan bixin, hal-abuurnimo" waa qiyamka asaasiga ah ee shirkadeena.
Koox xirfadlayaal ah, qalab casri ah, tayo deggan, adeeg la isku halleyn karo
Xakamaynta tayada adag.
Waqtiga dhalmada degdega ah.
3.Soosaarka xirfadeed iyo khibrad hodan ah.
4. Qiimaha tartanka ee leh adeeg sare.
S: Ma heli karaa shaybaarro? A
J: Macaamiisha cusub waxaa laga filayaa inay bixiyaan qarashka dirista, halka shaybaarka ay bilaash yihiin. Lacagtani waa laga goyn doonaa bixinta amarka rasmiga ah.
J: Farshaxan ama naqshadaynta sawir qaadista, samaynta shaybaarrada, tijaabooyinka tijaabada, waxsoosaarka tiro, baaritaanka tirada
S: Suurtagal ma tahay in la sameeyo slider-ka caadada ah iyadoo la raacayo codsi?
A: OEM waa la heli karaa, oo ay ku jiraan qaab gaar ah, midab, astaan, xirxirida ...
S: Ma heli karaa wax qiimo dhimis ah?
J: Qiimaha waa laga gorgortami karaa, waxaan kuu soo bandhigi karnaa qiimo dhimis iyadoo loo eegayo tirada dalabkaaga.